Kedu ihe na otu esi enweta Amazon Prime Reading | Ndị niile na-agụ akwụkwọ
Amazon Prime Reading, ọnụego ọhụrụ ewepụtara maka akwụkwọ ntanetị?
Joaquin Garcia | | Amazon unu si n'ihe unu, eBooks
1 Na-achọ onye na-agụ ihe maka mkpọchi?
1.0.0.1 Gbasara akwukwo Paperwhite
2 Gịnị bụ Amazon Prime Ọgụgụ?
3 Kedụ ka ị ga - esi nweta Amazon Prime Reading?
4 Kedu ka o si dị iche na Kindle Unlimited?
5 Gị onwe gị, olee nhọrọ ị ga-enweta site na ọnụego ndị a?
Na-achọ onye na-agụ ihe maka mkpọchi?
Ọtụtụ mmadụ na-ajụ anyị onye ga - azụta ihe iji mee ka mkpọchi dịkwuo ụtọ. Y’oburu n’achoghi igo ebe ozigbo, anyi na akwado 2.
Gbasara akwukwo Paperwhite
Onye na-ere ahịa kacha ere ahịa n'ahịa. Ọ bụ ihe ndị na-agụ Amazon
B ITTA ya
Maka ndị hụrụ ụkpụrụ na mma n'anya
N'agbanyeghị na ọnụego ewepụghị ego ebook abụwo tupu na mgbe ebook ụwa, ọ bụ eziokwu na ọtụtụ ndị ọrụ amabeghị ụdị ọrụ a. A ga-agbakwunye ọnọdụ a ọdịda nke ọtụtụ ọrụ ọgụgụ gụgharia, dị ka Oyster a ma ama ma ọ bụ Skoobe. Na ọnọdụ a, Amazon, nke na-eduga mpaghara ahụ na Kindle Unlimited, kpebiri iji ụzọ ọzọ a na-akpọ Amazon Prime Reading. Ma Gịnị bụ ọrụ ọhụrụ a? O dakọtara na eReader ọ bụla? Kedu ihe ga-eme Kindle Unlimited? Ọzọ anyị ga-agwa gị ihe ọrụ ọhụrụ a bụ na ebe ọ dị n'ime usoro ndụ okike Amazon.
Gịnị bụ Amazon Prime Ọgụgụ?
Amazon Prime Reading bụ ọrụ ọhụụ na-akparaghị ókè maka ndị ọrụ Amazon Prime. Anyị nwere ike ịkọwa ya dị ka ọnụego dị larịị maka ebook nke na-asọ mpi Nubico, Kindle Unlimited ma ọ bụ Scribd, ịkpọ aha ole na ole. Amazon Prime Reading enweghi akwukwo nile nke Amazon Kindle Unlimited nwere mana o nweghi obere ogo ahụ nke ndị edemede dị iche iche nke ebook nyere dịka ha bụ ndị kpebiri na ha ga-abụ ma ọ bụ na-enweghị ọrụ Kindle Unlimited. Yabụ anyị nwere ike ịsị na Amazon Prime Reading bụ ọnụego adịchaghị ebe mma guzo apụ n'elu nke ukwu. Ma ọ dịkarịa ala maka oge ahụ. Ya mere, mgbe anyị mepere katalọgụ Amazon Prime Reading anyị na-ahụ na eBooks kewara site n'ụdị: obi abụọ, ụjọ, akụkọ sayensị, ndị uwe ojii, ndị ntorobịa, Looney Planet ntuziaka na akwụkwọ ndị na-abụghị akụkọ ifo.
Caliber Portable: Ihe ọ bụ, ihe ọ bụ maka ya na otu o si arụ ọrụ
Akpa ego maka ugwo nke ogugu kwa ibe, ihe mere ka ozi mbu nke mbu nke Amazon bu ihe a na-achoghi adi na oru a, ya bu, Amazon na ndi nkwekorita ya na ndi mmadu na ha kpebie ego ha gha acho maka mgbazinye ma ọ bụ mgbazinye ego nke akwụkwọ ọgụgụ ma ghara ịmepụta akpa na ego niile sitere na ọrụ ahụ wee tọọ ọnụahịa maka ọgụgụ akwụkwọ.
Kedụ ka ị ga - esi nweta Amazon Prime Reading?
Onye ọ bụla nwere ike ịnwe Amazon Prime Reading na maka ọnụ ala karịa Kindle Unlimited, Naanị anyị ga-abụ ndị otu nke Amazon Prime wee sonye na Amazon Prime Reading ọrụ. Ndị otu a agaghị etinye ụgwọ ọ bụla ọzọ ma ọ ga-adaba na ọrụ ndị ọzọ Amazon Prime na Kindle Unlimited.
Ngwaọrụ dakọtara na Amazon Prime Reading ga-abụ ihe niile, ya bụ, ndị na - agụ ihe, mbadamba na ngwa maka ekwentị mkpanaaka, si otú a nwee ike ịgụ ebe ọ bụla. Ozugbo anyi mechara ihe a niile, anyi aghaghi icho akwukwo na ọ bụrụ na ọ bụ nke Amazon Prime Reading katalọgụ, ịlele bọtịnụ "agụ n'efu" ọ ga-apụta na ihe anyị ji agụ akwụkwọ. Maka oge ahụ anyị nwere oke ịgba akwụkwọ iri na otu, yabụ ọ bụrụ na anyị ekpuchila oke ahụ, naanị anyị ga-enyocha ọnụọgụ akwụkwọ nke anyị gụrụla ma kaa akara akwụkwọ ọhụụ ọhụụ. Ihe niile sitere na nhazi usoro Amazon.
Kedu ka o si dị iche na Kindle Unlimited?
Anyi aghaghi imesi ike na Isi ihe dị iche n’etiti Amazon Prime Reading na Kindle Unlimited dị na ọnụ ọgụgụ nke akwụkwọ ntanetị nke ọrụ ọ bụla nwere maka ndị ahịa ya na ogo ha. Mana, dịka anyị kwurula na mbụ, Amazon Prime Reading jupụtara n'ọgụgụ gwọọ, nyocha ma mụọ iji nwee ọ enjoyụ kachasị ịgụ akwụkwọ ọ bụla ebe Kindle Unlimited enweghị ya ma ọ bụ na ọ dịkarịa ala, anyị ga-eme ya n'onwe anyị.
Kobo Aura Otu nyocha
N'oge a nke a bụ isi ihe dị iche n'etiti ọrụ abụọ ahụ. Enwere esemokwu ndị ọzọ dịka ọnụahịa nke ọrụ ahụ ma ọ bụ aha aha ndị enwere ike ịgụ n'otu oge.
Ọnụahịa ahụ doro anya na Amazon Prime Reading dị ọnụ ala karịa Kindle Unlimited, ebe ọ bụ na Unlimited dara na akwụ ụgwọ nke 9,99 euro kwa ọnwa mgbe Amazon Prime Reading nwere ego nke 19,95 euro kwa afọ. Amazon Prime Reading na-esonyere Prime Video, Amazon Prime na ọrụ ndị ọzọ Amazon na-esonye na ọrụ a kachasị elu. Na nkenke, ọdịiche ọnụahịa dị n'etiti otu ọrụ na nke ọzọ doro anya. Ihe ndị ọzọ dị iche n’etiti ọgụgụ ọgụgụ ọrụ Amazon abụghị nke doro anya.
Otu ọrụ dị mkpa n'ime ọrụ Amazon bụ ọnụọgụ nke ederede anyị nwere ike ịgụ n'otu oge. Ọ bụ ezie na Kindle Unlimited na-enye gị ohere ịgụ ọtụtụ ebook n'otu oge ọ bụ ezie na ọ bụghị na ngwaọrụ niile anyị ga-achọ, Amazon Prime Reading naanị na-enye gị ohere ịgụ aha 10 n'otu oge, na-ahapụ aha ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịgbakwunye ọhụrụ ebook.
Ọ bụ eziokwu na njirimara a na-eme ka ọrụ ahụ gwụ ike, ma ọ dịkarịa ala maka ndị chọrọ ịhọrọ ma gụọ, mana ọ bụkwa eziokwu na akwụkwọ akụkọ Amazon Prime Reading abụghị nnukwu, ọkara puku ebook dị ka, iji nwee oke eBooks kariri.
Gị onwe gị, olee nhọrọ ị ga-enweta site na ọnụego ndị a?
Anyị ruru n'ókè na ọtụtụ n'ime unu na-eche Kedu ọrụ kwesịrị ya?
Maka ndị ọrụ kachasị achọ ịgụ akwụkwọ ha, Amazon Prime Reading bụ ezigbo nhọrọ, ikekwe ọtụtụ n'ime aha ndị a agụla ha. Mana ọ bụ eziokwu na ọnụ ahịa udele na-efegharị na Amazon Prime Reading.
Ruo ọnwa ole na ole, ọtụtụ ebe dị nso na Amazon Ha na-ekwuwapụta na Amazon ga-ebuli Amazon Prime òkè, site na 19,95 euro ruo 40 ma ọ bụ 100 euro kwa afọ, nke ga - ebuli ego nke ọrụ ndị a ma n'ihi ya, ọnụ ahịa nke Kindle Unlimited ga - adị ala. Mana ọ bụkwa eziokwu na etinyebeghị ọnụego ọnụahịa ma ọ bụ na amabeghị mgbe a ga-etinye ya n'ọrụ, yabụ anyị nwere ike iji ọnụahịa ahụ rite uru ugbu a ma nwee opekata mpe ọkara afọ nke ọrụ Prime.
Onwe ya, M na-adabere na ọnụ ọgụgụ dị ala nke Kindle Unlimited ma na-akwado ọrụ a maka ndị ọrụ na-achọ ịgụ akwụkwọ gwọọ na ndị ọrụ ndị agụghị akwụkwọ nwere obere mmasị. N'ihi gịnị? Ọfọn, n'ihi na Kindle Unlimited nwere ọtụtụ akwụkwọ na ọnụ ala dị ọnụ ala (ọ bụghị dị ka Amazon Prime Reading), na-ahapụ m ọdịnaya nke ọdịnaya, ihe anyị niile nwere ike ime na karịa karịa ọtụtụ ndị ọkachamara ma ọ bụ Artificial Intelligence kemgbe onweghi onye kariri anyi mara na ima uto uto anyi.
Ma, ọ bụrụ na anyị chọrọ n'ezie ịgụ ezigbo ọgụgụ ngwa ngwa ma ọ bụ na anyị bụ ndị ọrụ na-azụ ihe niile site na ụlọ ahịa Amazon, ikekwe ihe kachasị mma maka oge a bụ Amazon Prime Reading, ọ bụghị naanị maka ịgụ ya kamakwa maka mbupu n'efu nke Amazon ka na-enye ya ọzọ adịchaghị ahịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Ndị niile na-agụ akwụkwọ » ụlọ ọrụ » Amazon unu si n'ihe unu » Amazon Prime Reading, ọnụego ọhụrụ ewepụtara maka akwụkwọ ntanetị?
Ọ bụ n'ezie naanị iweghachi akwụkwọ niile gafere site na Flash Flash (Agaghị m eju m anya ma ọ bụrụ na ọ funahụrụ otu ụbọchị iji baara Prime Reading uru)
E wezụga nke ahụ, echere m na a ga-enwekwa ọtụtụ mpịakọta mbụ nke sagas ka oge na-aga ị kwụọ ụgwọ maka ndị ọzọ.
Ma ọ bụrụ na ọ bụ n'efu mgbe ahụ enweghị mkpesa ọ bụla. Ọ dịghị onye na-enye ihe ọ bụla yiri ya na ụlọ ahịa ndị ọzọ.
Anọ m na Mexico, ya mere azụrụ m n'aka Amazon na United States. Na-ebufe naanị n'efu na United States ma ọ bụ mbupu mba ọzọ? M na-ajụ ihe kpatara ya, otu ọnwa gara aga, achọrọ m ịzụrụ ihe karịrị ego egosiri ka m wee nwee onwe m n'efu, dị ka usoro Amazon gosipụtara, na mmachi bụ na ọ na-emetụta naanị mbupu n'ime United States. Daalụ, ụbọchị ọma.
Zaghachi Jorge Luis Cruz Pérez
nke abụọ barayazarra dijo
eme Ọnwa 8
Kedụ ka m ga - esi wepu aha na ọgụgụ isi, enwere m olile anya na ị zara ekele
Zaghachi nke abụọ barayazarra
Kobo Clara HD nyochaa